Kutarisa kuwana muganhu mumitambo yako yaunofarira? Heino sarudzo yedu yemakanakisa emitambo makhibhodi aunogona kutenga kuUK
Kutora yakanakisa mutambo wekutamba kwauri kunonetsa pachikonzero chimwe chete, uye chikonzero chimwe chete: mitambo yemakhibhodi inoitirwa kubata ziso nemagetsi anopenya eRGB. Horaiti, saka izvo zvinogona kunge zviri zvekuwedzeredza, asi zvichiri nyore kupedzisa forking kunze kwekhibhodi inotaridzika inokatyamadza mumifananidzo asi isingape chero hwaro.
Usavhunduka: isu tiri pano kuti tikubvise iwe kubva kune yako RGB-inosimudzira coma. Kusarudza yakanakisa mutambo wekutamba hakuna kumbosiyana nekusarudza chero imwe PC yekunze, mukuti iwe uchafanirwa kuongorora kuti yakawanda sei yaunoda kushandisa, wozopindura mibvunzo mishoma yakakosha. Semuenzaniso: Iwe unoda a mechanical keyboard? Unoda num-pad here? Iwe unowanzo gadzira Macros? Uye iwe unonyatsoda here iyo yakanyanya-RGB-yakasimba chigadzirwa iwe yaunogona kuwana?
Isu tinokubatsira iwe kupindura yese iyo mibvunzo (uye nevamwe vazhinji). Pakarepo pazasi, iwe unowana yedu inotungamira yekutenga yakanakisa yemitambo kiibhodhi iwe; kana iwe uchitoziva izvo zvekutanga, iwe unowana edu ekurumbidza achienderera kumberi pasi.
Heino sarudzo yedu yemakanakisa emitambo makhibhodi aunogona kutenga.
Maitiro ekusarudza akanakisa emitambo kiibhodhi iwe
Ini ndinofanira here kutenga yemuchina keyboard?
Vanhu vazhinji vanopika nema mechanical keyboard uye izvi zvinokonzererwa kune makiyi switch anoshanda akazvimiririra kubva kune mumwe nemumwe. Izvi zvinoita kuti vawedzere kuteerera, vanzwe kushoma mushy uye, vamwe vangakakavara, zvakanyatsoita mhando kana mutambo pa.
Haasi ese mashanduro akaenzana, zvisinei: kune akasiyana marudzi emagetsi switch anogadzirwa nevakagadziri vakasiyana. Iwo anonyanya kuremekedzwa machina switch anouya achibva kuGerman kambani Cherry. Iyo inogadzira huwandu hwenzvimbo dzinozivikanwa kwazvo Cherry MX michina switch: Nhema, Bhuruu, Bhurawuni uye Tsvuku.
Shanduko dzakasiyana dzemavara dzinozivisa manzwiro auchazove uri pamunwe wako.
MX Nhema iri mutsara uye yakaoma kudzvanya - yakakwana kune vanorema-ruoko vatambi.
MX Blue inogadzira kurira kukuru uye inowanzo sarudzwa nevataipi kana vatambi vanoda kunzwa kana vadzvanya kiyi uye vanogona kutsungirira ruzha.
MX Brown iri hafu yepakati peimba pakati peMX Tsvuku neMX Bhuruu - zviri nyore kuitisa, asi iine tactile bump kune avo vanoita mutambo uye vanyore zvakanyanya.
MX Red i membrane-senge switch yevatambi vanoda iyo yakapfava-yeku-dhinda switch.
Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti vakasiyana vagadziri vanogadzira yavo yavo switch - Logitech (Romer-G), SteelSeries (QS1 & Omni Point), Razer (Kailh), Roccat (Titan) - nepo vamwe vachiwana OEM switch kubva kuChina.
Chii chinonzi macros uye nei ndichifanira hanya?
Macro makiyi anobatsira kumitambo uko akawanda makiyi musanganiswa anoshandiswa nguva dzose. Kana iwe uchiwanzo svikira kune akati wandei-kiyi mirairo, iwe unogona kugovera chero akateedzana emakiyi kune macro, iyo inokubvumira iwe kuti uite iwo murairo neiyo imwechete, yekukurumidza kiyi yekudzvanya. Iyi inogona kuve nzira yakakosha yekurerutsa kumanikidza pamaoko ako. Mazhinji keyboards ane software inopa rutsigiro rwe macro uye vamwe vakatopa makiyi macro.
Ini ndinoda keyboard ine RGB mwenje?
Kunyangwe kana kwete iwe uchiona izvi seinofanirwa-kunge uine chinhu chiri pasi kune ako wega zvido, asi RGB mwenje inogona kuwedzera inodiwa-yakawanda yekuita yemunhu, ruvara uye mufaro kune iyo keyboard. Vamwe vagadziri, senge SimbiSeries, vakatosanganisa mwenje weRGB kuti ubatane nemutambo wako. Semuenzaniso, iyo MutamboSense chimiro pane chekambani Apex M800 michina keyboard chinovhenekera mitsetse yekhibhodi kuratidza mu-mutambo zvimisikidzwa senge yako ammo kana nhanho yehutano.
Vaka mhando, keycaps uye kiyi inodedera
Mazhinji keyboards akagadzirwa kubva kune epurasitiki yakaoma, asi mamwe anotaridzika uye anonzwa kuwanda kwepamusoro nekuchinjisa plastiki yesimbi. Chero chipi chinogadzirwa nemugadziri, chinangwa chekhibhodi yakavakwa zvakanaka kuratidza zero flex. Kana iwe uchida akanakisa, akavimbika manzwiro paunenge uchitaipa kana kutamba, iyo keyboard inofanirwa kuona kuti makiyi akabatwa zvakakwana munzvimbo, uye usatsause kana kusimuka kunze kwekuenderana kana iwe ukaadzvanya iwo.
Iyo yekuvaka mhando yemakiyi yakakoshawo. Zvirinani-mhando keycaps inogara kwenguva yakareba uye unonzwa zvirinani pamunwe wako. Makiyi akagadzirwa zvakanaka zvakare haazungunuke, zvichireva kuti vanopa typing isingachinjiki uye kuita kwemitambo - saka unorova kiyi chaiyo kazhinji
Ndezvipi zvimwe zvinhu zvandinofanira kutarisa?
Kune akawanda maficha ekufunga nezvazvo, mamwe acho anowanikwa pane yakakwira-mutengo mutengo. Izvi zvinosanganisira zororo reruoko; tambo inobviswa (idzi dzinowanzo kuve dhizaini yekugara yakasimba); USB uye odhiyo passthrough; yakatsaurwa midhiya uye macro makiyi; vhiri vhiri; uye, chekupedzisira asi chisiri chidiki, bundled software iyo inobvumidza iwe kugadzirisa yako keyboard kuita uye magetsi arongedzo.
Akanakisa emitambo ekutamba ekutenga
1. HyperX Alloy Core RGB: Yakanakisa bhajeti yemitambo keyboard
Price: £ 45 | Tenga izvozvi kubva kuMutambo
Iyo HyperX Alloy Core RGB ndeye understated keyboard yekutarisa. Asi tarisa padyo padyo uye iwe unowana akasiyana akasarudzika maficha akarongedzwa mune iyo isingafarire furemu hapana chakanyanya kupenya pamusoro peiyo Alloy Core RGB, asi kana iri kutamba pabhajeti iwe yaunoteedzera, haugone kuwana zvirinani kupfuura izvi.
Mifananidzo hainyatsoita iyo Alloy Core RGB kururamisira: yakapfava dema furemu yakanyanya kusimba (uye yakatetepa zvishoma) kupfuura inotaridzika, uye inogara yakati sandara pamusoro petafura yako, ichigadzirisa kushomeka kwezororo rakasungwa remaoko. Iyo zvakare isingadururike, inova yakanaka bhonasi. Iyo kiyi ye membrane iri nyore kubata, ichiita kuti zvive nyore kunyora pairi, kunyangwe ivo vatambi vanosarudza mabhatani emakaniki emabhodhi achazoda kutarisa kumwe kunhu.
Nyeredzi yekuratidzira pano, zvisinei, ndiyo suite yemamwe ekudzora. Iyo Alloy Core RGB ine ina akazvitsaurira midhiya mabhatani (mira, kudzorera kumashure, kumbomira / kutamba uye nekumhanyisa kumberi) ese anowanikwa zviri nyore pamusoro peNumpad. Iyo zvakare ine yakatsaurwa vhoriyamu ekudzora mabhatani (vhoriyamu kumusoro / pasi uye mbeveve) uye kunyangwe hutatu hwemamwe mabhatani asina kujairika: imwe yekushandura mavara eaka shanu-zone RGB backlighting; imwe yekugadzirisa kupenya kwechiedza chemwenje; uye imwe yekuvhura Game mode, iyo inokiya iyo Windows kiyi yekudzivirira netsaona michina.
Kana iwe uchida yakachipa keyboard isina skimp pane zvekuwedzera uye usine hanya neiyo membrane kiyi switch, iyo Alloy Core RGB ndiyo yako.
Key specs - Shanduko dzakaongororwa: HyperX membrane; Mudzorera: RGB; Wrist zororo: Aihwa; Zvimwe zvengarava: Hapana; encombrements: 443 X 175 X 36mm
HyperX HX-KB5ME2-UK Alloy Core RGB Membrane Yemitambo Khibhodi (UK Kurongeka)
£ 42.99 Tenga izvozvi
HyperX Alloy Core RGB - Membrane Yemitambo Khibhodi, Inonyaradza Yakanyarara Yakanyarara Keys ine RGB LED Mwenje Mhedzisiro, Spill Resistant, Dedicated Media Keys, Inoenderana ne Windows 10/8.1/8/7 - Nhema
$49.99 Tenga izvozvi
2. Razer Ornata V2: Yakanakisa yemitambo kiibhodhi yebasa
Price: £ 100 | Tenga ikozvino kubva kuAmazon
Iyo Razer Ornata V2 inoshamisa zvese zvinotenderera. Iko kune inofadza heft kune yayo squat, rectangular furemu, rudzi rwekusasarudzika iyo inokweretesa pachayo zvakanaka kune ese ari maviri mutambo nekutamba. Iyo yekuzorora yechiuno-yekuzorora inofadza chose kushandisa; kutaura zvazviri, icho chidiki cheicho chinodiwa, nekuti kana usipo uchanetseka kuti uwane makiyi.
Iyo Ornata V2's inotsanangudza ficha ndeye yayo mecha-membrane makiyi switch. Kusanganisa iwo maviri akakosha mafomu eiyi kiyi switch inoburitsa chimwe chinhu chemakakatanwa mhedzisiro; actuation ndeyechokwadi padivi rakasimba, saka vabati vechiedza vangangoda kutarisa kumwe kunhu. Mushure mekutanga kusava nechokwadi, zvakadaro, ndakazviwana ndichidziya kune Ornata's mecha-membrane makiyi. Ivo vakadzikama kupfuura akajairika mamakaniki makiyi, kwechinhu chimwe; uye kune imwe, vanogara zvakati sandarara pakatarisana nepamusoro pekhibhodi, iyo ini yandakawana ichiita kuti kusvetuka kutenderedza nyore nyore.
Iyo Ornata inouya neRazer yakajairwa suite yemidhiya zvinodzora, mashandiro makiyi (kusanganisira mutambo modhi uye inogadziriswa macros) uye haina skimp pane iyo RGB backlighting. Kune zvekare mamwe mafungiro ehunhu-e-ehupenyu maficha, zvakare, kunge chiteshi pazasi nepasi paunogona kufambisa tambo yakarukwa - kuruboshwe, kurudyi kana pasi pakati.
Kana iwe uchinyatsoda yakazara-yakaputirwa mutambo wemitambo, isu tinokurudzira chimwe chinhu senge Roccat Vulcan pazasi. Kana zvakadaro iwe uri mushure mekhibhodi yakasununguka muhofisi sezvazviri muWarzone, iyo Ornata V2 isarudzo yakanaka kwazvo zvirokwazvo.
Key specs - Shanduko dzakaongororwa: Razer Mecha-Membrane; Kudzosera: Synapse RGB; Wrist zororo: Ehe; Zvimwe zvengarava: Aihwa; encombrements: 460 X 155 X 30mm
Razer Ornata V2: Yekutamba Khibhodi neMecha-Membrane Keys, Hybrid MechaMembrane neRazer Chroma RGB Backlight, Mechanic switch, UK-Layout
£ 70.97 Tenga izvozvi
3. Roccat Vulcan 120/121/122 Aimo: Yakanakisa yemitambo kiibhodhi
Price: £ 145 | Tenga izvozvi kubva kuScan
Roccat inoshamisa Vulcan 120 Aimo - imwe yedu-yenguva-yese inodiwa mitambo yekutamba - ine vanin'ina vaviri. Iyo Vulcan 121 Aimo yakaongororwa pano i120 Aimo mune nhema colourway, nepo 122 Aimo iri yakafanana modhi mune chena. Hazvina mhosva kuti iwe unotenga keyboard ipi, zvisinei, iwe unogona kuve nechokwadi chechinhu chimwe: urikushandisa mari pane imwe yeakanakisa emitambo kirabhu kutenderedza.
Dhizaini yeVulcan inokatyamadza inogoneswa neakasarudzika Titan kiyi switch iyo yakasimba zvakakwana kubvumira Roccat kubvisa iyo dzimba inowanzo kukomberedza kiyi. Mhedzisiro yacho inoshamisa, kunyanya kana iwe uri fan yeRGB. Iyo Titan switch inouya mumhando mbiri, 1.8mm "tactile" uye 1.4mm "mutsara"; takaedza zvekare uye takanyatsoda kudzika kwekufamba, kushomeka kushoma uye kudzvanya kwakawanda (iri izwi rehunyanzvi).
Kufanana nemazhinji emabhodhi emitambo, iyo Vulcan 121 Aimo ine sarudzo yemidhiya kudzora, kusanganisira vhoriyamu dial iyo inofadza kwazvo kushandisa, uye inouya nezera rakatetepa rewrist zororo iro, nepo rinoshandisa, rinoita basa racho zvakakwana.
Kunyangwe ichishaya makiyi akatsaurwa macro, unogona kugadzirisa makiyi mashandiro (pamwe nemwenje mheni) uchishandisa Roccat zvakadzama kana rakaputirwa Swarm application.
Iko hakuna yakapusa nzira yekuisa izvi: kana iwe uchida kuzvibata iwe kune yepamusoro-notch yemitambo keyboard, tenga iyo Roccat Vulcan 121 Aimo.
Verenga zvakakwana Roccat Vulcan 120 Aimo kuongorora for details
Key specs - Shanduko dzakaongororwa: Roccat Titan; Kudzosera: RGB; Wrist zororo: Ehe; Zvimwe zvengarava: Aihwa; encombrements: 462 X 235 X 32mm
Roccat Vulcan 121 AIMO - Mechiniki yeMitambo yeKiyibhodhi (Kurongwa kweGerman)
£ 166.61 Tenga izvozvi
4. Razer Huntsman Mini: Yakanakisa komputa yemitambo keyboard
Price: £ 130 l Tenga ikozvino kubva kuAmazon
Haisi yakachipa, asi Razer's Hunstman Mini ndiyo yakanakisa keyboard kune ma gamers ane mashoma dawati nzvimbo. Yakanyorerwa se60% mutambo wekutamba, iyo Huntsman Mini inoshandisa mhedziso isina chinhu yemakiyi - haina sumbu repamba, Numpad kana mutsara webasa, semuenzaniso, kunyangwe zvese izvi zvigadzirwa zvichiri kugona kuwanikwa kuburikidza neyechipiri mabasa. Ingo bata bata iyo Fn kiyi, uye makiyi ekudimbudzira (ane mativi-akadhindwa mabasa) anovhenekera.
Iyo Razer Hunstman Mini inowanikwa mune maviri mavara: 'Nhema' uye 'Mercury' uye inogona kutorwa musarudzo yemakiyi maviri switch. Yekutanga, iyo yatakatarisa, inoshandisa switch yeRazer's 'Clicky Optical', kana iwe unogona kusarudza switch dzaRazer's 'Linear Optical', iyo inoderedza ruzha uye ine diki yekumisikidza kure - sarudzo iri nani yezvido zvinoshuvira izvo zvisingade. tsamwisa avo vavanotamba navo pamwe nekutsiva kwavo kwekuisa pamusoro pe mic.
Uye hongu, iyo Huntsman Mini inouyawo yakashongedzerwa neRazer's rakanakisa Synapse software, ichikubvumidza iwe kuti unyatsogadzirisa iwo RGB mwenje, uye uienzanise pamwe nechero ipi yeimwe yeRazer zvigadzirwa zvaunazvo. Iyo chete yekudzikira ndeyekuti iyo keyboard inokwidziridzwa zvishoma, uye sezvo iri diki kwazvo, zvinogona kuve zvakaoma kuwana rakakodzera-saizi zororo zororo.
Key specs - Shanduko dzakaongororwa: Razer Optical; Kudzosera: Synapse RGB; Wrist zororo: Aihwa; Zvimwe zvengarava: Hapana; encombrements: 294x 104 x 37mm
Razer Huntsman Mini (Purple Chinja) - Yakakwenenzverwa Yemitambo Khibhodi (Yakakwenenzverwa 60% Khibhodi ine Clicky Opto-Mechanical Swichi, PBT Keycaps, Inotsvaga USB-C Cable) UK Kurongeka
5. Logitech G613: Iyo yakanakisa isina waya mitambo yekutamba
Price: £ 80 | Tenga ikozvino kubva kuAmazon
The Logitech G613 iri isina waya yemitambo yemitambo keyboard iyo ine inoshamisa 1ms mushumo rate pamusoro peLogitech yake Lightspeed isina waya tekinoroji. Izvi zvinopa wired-senge chiitiko kune yakasarudzika mashoma Logitech zvigadzirwa, kusanganisira iyo G613.
Logitech yakasanganisira makiyi matanhatu anogona kugadziridzwa, ayo anogona kugadziriswa kuburikidza neLogitech Gaming software. Iko kune yakatsaurwa midhiya kudzora kurudyi uye mutambo-modhi bhatani iyo inokiya iyo Windows kiyi. Kana zviri zvebhatiri hupenyu, iyo G613 ine yakanokorwa bhatiri hupenyu hwemwedzi gumi neshanu uye inotora maviri mabhatiri eAA, ayo anosanganisirwa. Chinhu chinonyanya kufadza chebhobhoyo ndeyayo isina waya uye kubatana kweBluetooth. Nekudzvanya kuri nyore kweimwe yemabhatani epanyama, iwe unozoshandura pakati penzira mbiri idzi. Kana zviri zvekuita, iyo Romer-G michina switch ndeye mufaro chaiwo wekutaipa pairi.
Neimwe nzira, kana iwe uchitsvaga RGB yemagetsi backlit makiyi, yakaderera-chimiro dhizaini (yakafanana neiyo Roccat Vulcan 120 Aimo, pamusoro) uye uchida kuchengeta zvinhu zvisina waya, funga iyo G915. Iyo keyboard zvakare inosanganisira iyo nyowani-yakaderera-mbiri GL switch inoitwa naKailh. Yambira, zvisinei, iyo G915 inokudzosera kumashure 210.
Verenga zvakakwana Logitech G613 ongororo for details
Key specs - Shanduko dzakaongororwa: Romer-G; Kudzosera: Aihwa; Wrist zororo: Yakabatanidzwa; Zvimwe zvengarava: Hapana; encombrements: 478 X 216 X 33mm
Logitech G 920-008392613 Wireless Gaming Khibhodi (Mechiniki Khibhodi ine Lightspeed Technology) - UK Kurongwa
£ 79.99 Tenga izvozvi
Logitech G613 LIGHTSPEED Wireless Mechanical Kubhejera Khibhodi, Multihost 2.4 GHz + Blutooth Kubatana - Nhema
$78.99 Tenga izvozvi
6.Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma V2: Yakanakisa tenkeyless keyboard
Price: £ 88 | Tenga ikozvino kubva kuAmazon
The Razer BlackWidow Yekushanya Dhizaini Chroma V2 inotaura mukanwa, asi iyi keyboard haina kana chikuru. Pasina iyo pad pad, iyo Razer ndeye tenkeyless (TKL) keyboard. Mukati mehomwe yacho, iwe unowana inowoneka yakashongedzwa tambo uye zororo remagineti, iro rinopa kunzwa kwakanyanya kwazvo.
Iwe zvakare uchawana Razer akashandisa ayo ega ma switch, iyo inogadzirwa neChina chinogadzira Kailh. Iyo mutsara uye yakanyarara michina switch inoda 45g yesimba kuti iite, ichiita kuti ienzaniswe neCherry MX Speed ​​Sirivhi switch. Makiyi akazara RGB-yakavhenekerwa uye akasununguka kwazvo kumutambo kana kutaipa pa.
Key specs - Shanduko dzakaongororwa: Razer Tsvuku; Mudzorera: RGB; Wrist zororo: Ehe; Zvimwe zvengarava: Aihwa; encombrements: 370 X 206 X 40mm
Razer Blackwidow Yekumhanyisa Dhizaini Chroma V2 - RGB Ergonomic Mechanical Kubhejera Khibhodi - Wrist Zororo - Tactile & Chinyararire Orange switch.
£ 87.43 Tenga izvozvi
7. HyperX Alloy Elite 2: Iyo yakanakisa yekutamba keyboard yezvinhu
Price: £ 127 | Tenga ikozvino kubva kuAmazon
HyperX's jazzy "pudding" keycaps ndicho chinhu chekutanga chauchacherekedza iwe paunowona Alloy Elite 2 - ivo havaite chero chinhu, zvinosuruvarisa, asi ivo vakanakisa kuona. Tarisa kupfuura kwekunze kwekunze, zvisinei, uye iwe unowana inoshamisa-yakagadzirirwa michina yemitambo keyboard iyo inomiririra yakanaka yakanaka kukosha kwemari.
Iyo Alloy Elite 2 ine yakazara yakazara yeakakura, anowanikwa zviri nyore midhiya kudzvanya, kusanganisira playback kutonga (kumbomira / kutamba, kudzoreredza, kusvetuka) uye vhoriyamu kutonga (bhatani bhatani uye vhoriyamu vhiri). Iyo zvakare ine bhatani kutenderera kupenya kweiyo RGB mwenje; bhatani kutenderera iwo mwenje mhedzisiro; uye bhatani rekushandisa Game mode (kukiya iyo Windows kiyi yekudzivirira netsaona michina). Iyo cherry pane iyo keke ndeye USB yekupfuura-kuburikidza chiteshi cheiyo yako yekutamba mbeva kana yekunze chengetedzo chishandiso.
HyperX's mechanical switch - inowanikwa pane iyo keyboard iri mubvunzo - inowanikwa mune matatu akasiyana. Iwo matsvuku (mutsara) switch dzatakayedza dzaive dzakakodzera basa uye kutamba asi dzakashaiwa zvakanyanyisa kudzvanya zvinoitwa nevatambi zvavanofarira. Ivo vane penchant yekucheka vangangoda kuyedza iyo yeblue switch pane.
Mukushandisa kwakawanda, zvakadaro, iyo Alloy Elite 2 yainakidza kutaipa uye mutambo pa. Kushaikwa kwekuzorora kwemaoko kunoodza moyo, asi pamwe ndiyo chete inodzosera kune iyo yakasarudzika mutambo wekutamba nhabvu ine makwikwi anotyisa - kunyangwe ichiri inorema - mutengo weti.
Key specs - Shanduko dzakaongororwa: HyperX michina (Tsvuku); Mudzorera: RGB; Wrist zororo: Aihwa; Zvimwe zvengarava: 1 xUSB-A; encombrements: 444 X 174 X 37mm
HyperX Alloy Elite 2 - Mechanical Gaming Khibhodi, Software-Inodzorwa Mwenje & Macro Kugadziriswa, ABS Pudding Keycaps, Media Controls, RGB LED Backlit. Linear Shandura, HyperX Tsvuku
£ 126.85 Tenga izvozvi
HyperX Alloy Elite 2 - Mechanical Gaming Khibhodi, Software-Inodzorwa Mwenje & Macro Kugadziriswa, ABS Pudding Keycaps, Media Controls, RGB LED Backlit, Linear switch, HyperX Red
$129.99 Tenga izvozvi
8. Corsair K55 RGB: Iyo yakanyanya kukosha mutambo wemitambo
Price: £ 55 | Tenga ikozvino kubva kuAmazon
Kana iwe uri pane yakasimba-ish bhajeti uye uchida iyo yemitambo keyboard iyo ichiri kuendesa yakanaka ficha yakatarwa, iyo Corsair K55 RGB inzvimbo yakanaka yekutanga. Inoratidzira zororo rinodzikika, makro akazvitsaurira uye midhiya makiyi uye inouya yakafanogadziridzwa ine gumi-nharaunda nhatu RGB mheni mhedzisiro - zvinoreva kuti iwe unogona kuiita kuti ipenye senge chiteshi chenguva.
Kunyangwe isina makiyi emakanika, ine akawanda-kiyi anti-ghosting iyo inobvumidza iwe kudzvanya seakawanda makiyi sekugona kweminwe yako. Pamutengo wayo, iri rakanakisa mutambo wekutamba.
Key specs - Shanduko dzakaongororwa: N / A; Kudzosera: Zonal RGB; Wrist zororo: Ehe; Zvimwe zvengarava: Hapana; encombrements: 480 X 166 X 35mm
Corsair K55 RGB Membrane Yekutamba Khibhodi (6 Inogadziridzwa Macro Keys, 3-Zone RGB Kudzosera kumashure, Multimedia Kudzora, UK Kurongeka) - Nhema
£ 49.99 Tenga izvozvi
Corsair K55 RGB Yemitambo Yekhibhodi - IP42 Guruva uye Kuramba Kwemvura - 6 Zvirongwa Macro Keys - Dedicated Media Keys - Inosvikika Palm Zororo Inosanganisirwa (CH-9206015-NA), Nhema
$49.88 Tenga izvozvi
9. SteelSeries Apex 7: Iyo yepamusoro-yekupedzisira mitambo yekutamba keyboard
Price: £ 170 | Tenga izvozvi kubva kuCurrys PC Nyika
Kana mari isiri chinhu, kana kana iwe uchitsvaga yakasarudzika mutambo wekutamba kuti upenye pane inotevera LAN bato iwe yaunopinda (hongu, isu takanamatira muna 2001), iyo SteelSeries Apex 7 ndiyo khibhodi yako. Inowanikwa mune ese akazara-saizi uye marongero eTKL, iyo yekutanga gimmick pano chiratidzo cheOLED chakakomberedzwa mukona yepamusoro-kurudyi yebhodhi iyo inogona kuyananisa nemamwe maapplication nemitambo (seSpotify, kana CS: GO) kuratidza ruzivo rwakakodzera - kana chingori chifananidzo chaJeff Bezos, kana iwe uri weirdo seni.
Asi hazvisi zvese nezve zvinyengeri. Iyo Apex 7 ikirabhu inoshamisa inokwanisa. Kunyangwe isingashandise isingarambike yepamusoro Cherry MX switch, maSimbiSeries 'mavhezheni avo anotevedzera akanaka; isu takashandisa iyo "inonzwisisika uye yakanyarara" Brown switch uye takavawana vari nyore kunyora pairi uye zviri nyore vachiri kutamba mutambo pairi, iine anoonekwa bundu pakati pezasi kwe2mm actuation daro. MaGamers ari kutsvaga ye "clickier" chiitiko vanofanirwa kuve nechokwadi chekutenga maBlue switch pane.
Ine furemu yakavakwa kubva kune rimwe pepa realuminium, iyo Apex 7 ine uremu hunofadza kwariri. Iyo mbiri-USB tambo yakafanana nehuremu, uye inogona kuendeswa kuruboshwe, kurudyi kana pakati nepakati nepasi pezasi kwekhibhodi. Iyo chete misstepep maererano neyakavakirwa mhando ndiwo makiyi ekuzvivharira iwo - ivo vakanaka kwazvo kunyora pairi, asi ivo vanotaridzika kunge diki kana vachibatanidzwa neakashama akafumurwa makiyi emakiyi.
Iyo Apex 7 zvakare ine imwechete USB-A passthrough port (kugadzira maviri mairi hogi kumashure kwePC yako) pamwe neyakareruka seti yemidhiya ekudzora iri padyo neiyo OLED kuratidzwa mukona yepamusoro-kurudyi. Aya masimba - vhiri vhiri uye kumbomira / bhatani bhatani - zviri nyore zvakakwana kushandisa, asi gara kure kure nekiyi dzepedyo, saka kuvabaya pasina kurova chero mamwe makiyi kunonyengera.
Zvese kubva kubhatani mashandiro kuenda kumacros kusvika kuvhenekera kumufananidzo pane yako OLED kuratidza kunogona kuve yakagadzirirwa muSimbiSeries 'yakanakisa Injini app, inogara yakakwira nzvimbo yeakakura e SteelSeries chiitiko.
Key specs - Shanduko dzakaongororwa: SteelSeries Brown; Mudzorera: RGB; Wrist zororo: Ehe; Zvimwe zvengarava: 1x USB-A; encombrements: 403 X 17 X 139mm
SteelSeries Apex 7 TKL Mechanical Gaming Khibhodi, OLED Ratidza, Bhuruu switch, Chirungu QWERTY Marongerwo
10. Razer BlackWidow Elite: Iyo yakakosha kukosha yepamusoro-magumo mutambo wemitambo keyboard
Price: £ 150 | Tenga izvozvi kubva kuScan
Kune avo vanofarira kuwana yemhando michina keyboard kune yakaderera pane iyo RRP, iyo BlackWidow Elite inoshandisa zvakakwana maficha, uye inokatyamadza, asi ergonomic dhizaini yekukodzera kufunga nezvayo. Pakutanga kubvarura £ 170 pakuvhurwa, iyo BlackWidow Elite ikozvino inogona kuwanikwa iri pasi pe- $ 100, iri kutaura isingabirwe zvachose.
Sezvakaita nemamwe maRazer makhibhodi, echimishini switch kumashure kweiyi yega kiyi ndiyo yakakosha dhizaini, padhuze neanoyevedza maratidziro emwenje mhedzisiro neRazer Chroma
Iyo keyboard inouya mumatanho matatu akasiyana, rimwe nerimwe riine rakasiyana rekodhi Razer kiyi switch iri pasi pemakiyi. Isu takaedza izvo zvakasiyana nemaorenji switch (iyo vhezheni Razer inodaidza 'Tactile uye Yakanyarara') uye takaona kuti isu takakwanisa kugona kurova makumi manomwe neshanu mazwi / min ne75% kunyatso mushure menguva pfupi pfupi nekhibhodi. Uye kugadzira iko kukurumidza kutaipa - kana zvimwe zvingangoitika, musangano wekutamba husiku-husiku - nyore, ivo Elite vanouya nezororo rakasununguka rakapetwa remaoko.
Chinhu chimwe chinoita kuti iyi keyboard iratidzike kusanganisa kweimwe USB 2.0 passthrough port uye 3.5mm odhiyo jack padivi, inobatsira zvakanyanya pakuvhura headset, senge iyo Razer Kraken kana Hydra mamodheru mukati musingatombofanira kurwisana neyako rig kusvika kuzviteshi zvemashure. Iwo midhiya ekudzora mabhatani pamusoro zvakare ari anotonhorera kubata, saka zvakare iro rakakura vhoriyamu vhiri.
Pakazara, iyi keyboard inonakidza pakutanga neayo ushingi aesthetics asi inozviratidza pachayo nezvose zvinhu uye dhizaini kuburikidza neayo inoshamisa kuvaka mhando uye suite yezvinonakidza zvinowedzerwa. Izvo zvakakodzera zviripo kune chero munhu anotarisa kusimudzira yavo rig.
Key specs - Shanduko dzakaongororwa: Razer michina; Kudzosera: Synapse RGB; Wrist zororo: Ehe; Zvimwe zvengarava: USB 2.0, 3.5mm Jack; encombrements: X X 24 49 8 masendimita
Razer BlackWidow Elite: Esports Gaming Keyboard - Multi-Rinoshanda Dhijitari Dial neDedicated Media Controls - Razer Green Mechanical Swichi (Kugadziriswa kweUS)
Ongorora | HyperX Cloud Alpha Pro Kubhejera Headset
Razer Rinosvitsa Huntsman Keyboard Yakakonzera Razer Opto-Mechanical Switches
Iyo 5 Yakanakisa Mechiniki Yemitambo Yekutamba ye2017